Momba anay - Tspringwater Co., Ltd.
Manome akanjo fitafiana toy ny Swimwear, Akanjo amoron-dranomasina izahay, famolavolana fampidirana, atin'akanjo, akanjo anatiny miakanjo, akanjo fanatanjahan-tena ho an'ny vehivavy, lehilahy sy ankizy. Azontsika atao koa ny manamboatra kitapo isan-karazany toy ny Climbing pack, Lunch Bag, solosaina kitapo.etc.
Ny orinasanay dia tsy vitan'ny hoe mampiasa milina fanjairana mandroso sy fizotra matihanina hamokarana akanjo, fa mampiasa mpiasa efa za-draharaha koa. Ny orinasanay dia afaka manamboatra vokatra mihoatra ny 2000 pcs indray andro. Ny orinasanay dia mamatsy fitafiana ara-panatanjahantena any amin'ny firenena mihoatra ny 65 ka hatramin'ny 4500 mahery ny mpivarotra antsinjarany. Tsy ny serivisy ODM ihany no ataonay fa ny serivisy OEM ihany koa.
Fanajana ny mpanjifa, Integrity, Ekipa aloha
Vinan'ny orinasa: Mamorona vokatra marika fanatanjahan-tena malaza eran-tany
Filôzôfia momba ny orinasa: fahamarinana, fiaraha-miasa, toe-javatra mandresy, fampandrosoana!
Toetran'ny orinasa: Manentana fanahy, salama, be fanantenana, mandefitra, mizara, firaisana, fankasitrahana.
Iraka ataon'ny orinasa: Mamorona sanda ho an'ny mpanjifa, mahatsapa nofinofy ho an'ny mpiasa, Manambina ho an'ny tanindrazana ary manaova ezaka tsy manam-petra ho an'ny fahasambaran'ny tenany sy ny fianakaviany.